Google dia nilaza fa ny AI dia haingana kokoa amin'ny famolavolana puce | Avy amin'ny Linux
Google dia nilaza fa ny AI dia haingana kokoa amin'ny famolavolana puce
Darkcrizt | 11/06/2021 12:03 | Nohavaozina amin'ny 11/06/2021 21:36 | About us
Google dia nilaza fa efa nivoatra rindrambaiko iray an'ny faharanitan-tsaina artifisialy afaka mamolavola poti-solosaina haingana kokoa noho ny olombelona. Tao amin'ny lahatsoratra iray navoaka andro vitsy lasa izay, Google dia nanambara fa ny puce iray izay haharitra mandritra ny volana maro ny olombelona dia azo eritreretina amin'ny alalany AI ao anatin'ny enina ora latsaka.
Fahaizana artifisialy dia efa nampiasaina mba hampivelarana ny iteration farany indrindra an'ireo chips Fitaovana fanodikodinam-bola (TPU) avy amin'i Google, izay ampiasaina hanatanterahana asa mifandraika amin'ny faharanitan-tsaina, hoy i Google. Nilaza ireo injenieran'ny Google fa mety hisy "fiantraikany lehibe" ho an'ny indostria semiconductor ny fandrosoana.
Raha ny tena izy dia momba ny famaritana ireo singa toy ny cores CPU sy GPU ary ny fahatsiarovana apetraka mifanipaka amin'ny puce. Ny toerana misy azy ireo amin'ireo takelaka kely ireo dia zava-dehibe satria misy fiantraikany amin'ny fandaniana herinaratra sy ny hafainganam-pandehan'ilay puce; ny tariby sy ny familiana famantarana ilaina hampifandraisana ny zava-drehetra dia zava-dehibe indrindra.
Ireo injenieran'i Google, Azalia Mirhoseini sy Anna Goldie, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy, dia mamaritra ny rafi-pampianarana fanamafisana lalina afaka mamorona "lamina fototra" ao anatin'ny enina latsaka, raha indraindray kosa mila amam-bolana maro.
Amin'ny teny hafa, Google dia mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hamolavolana chips izay azo ampiasaina hamoronana rafi-pitsikilovana artifisialy izay be pitsiny kokoa.
Ny rafitra mitovy amin'izany dia mety handresy ny olombelona amin'ny lalao sarotra toa ny go sy chess. Amin'ireto scenario ireto, ny algorithma dia zarina hampihetsika ireo singa izay mampitombo ny vintana handresenao ny lalao, fa amin'ny seho tile dia voaofana ny AI hitady ireo fitambarana singa tsara indrindra hahomby araka izay azo atao amin'ny lalao.
Ny teknolojia neural koa dia mampiasa teknika sasany izay noheverin'ny indostria semiconductor taloha, fa nilaozana ho faran'ny maty. Araka ny voalazan'ilay lahatsoratra, ny rafi-pitsikilovana artifisialy dia nahazo pirinty 10.000 ho an'ny chip mba "hianarana" izay mandeha sy izay tsy mandeha.
"Ny fomba fiasa anay dia nampiasaina handrafetana ny taranaka manaraka ny mpandeha haingana an'ny Google AI ary mety hamonjy ezaka an'arivony ora ho an'ny olombelona isaky ny taranaka vaovao," hoy ny nosoratan'ireo injeniera. "Amin'ny farany, mino izahay fa ny fitaovana maoderina mahery vaika natao ho an'ny AI dia handroaka ny fandrosoan'ny AI, ka hiteraka fifandraisana symbiotika eo amin'ny sehatra roa."
Araka ny voalazan'ilay lahatsoratra, rehefa manamboatra mikrosesy na mpanafainganana asa dia matetika ilaina ny mamaritra ny fomba fiasan'ny zanadrafitra amin'ny fiteny avo lenta, toa ny VHDL, SystemVerilog, na angamba koa ny Chisel.
Ity kaody ity dia handika amin'ny farany hoe inona no atao hoe lisitra net, izay mamaritra ny fomba tsy maintsy ampifandraisin'ny tariby amina tariby sy ny sela amin'ny alàlan'ny tariby hanatanterahana ny asan'ny puce.
Ny sela mahazatra dia misy singa fototra toy ny vavahady lojika NAND sy NOR, raha ny makroblocks kosa dia misy andiana sela mahazatra na singa elektronika hafa natao hanatanterahana asa manokana, toy ny fanomezana fahatsiarovana amin'ny chip na ny lozisialy. Noho izany, ny sakana lehibe dia lehibe kokoa noho ny sela mahazatra.
Avy eo dia tsy maintsy misafidy ny fomba handaminana an'ity lisitry ny sela sy ny makroblock ao amin'ny puce ity ianao. Araka ny filazan'ny mpiasan'ny Google, mety maharitra herinandro maromaro na volana maro mihitsy aza ny injenieran'olombelona hiara-miasa amin'ireo fitaovana famolavolana puce manokana ary miverimberina matetika mba hahazoana drafitra voavolavola mifototra amin'ny filàna amin'ny fanjifana herinaratra, fotoana, hafainganana, sns.
Ny zava-mitranga matetika amin'ity dingana ity dia ny tsy maintsy ovaina ny toerana misy ny sakana lehibe rehefa mihalehibe ny endrika. Ary avy eo dia tsy maintsy avelanao ireo fitaovana mandeha ho azy, izay mampiasa algorithma tsy manam-pahaizana, mandatsaka ireo sela mahazatra kokoa ary avy eo hadio ary avereno mandra-pahavitanao, hoy ny dokotera.
Mba hanafainganana ity dingana famolavolana paikady ity, ireo manam-pahaizana manokana momba ny fahaizana artifisialy Google dia namorona rafitra tambajotran-tsolika mifangaro izay manao ny fametrahana makro-block samirery ao anatin'ny ora vitsivitsy hahatratrarana endrika tsara indrindra.
Ny sela mahazatra dia apetraka eo amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny rindrambaiko hafa, araka ny lahatsoratra. Rafitra fianarana ny milina ity Tokony ho afaka hamorona sary idealy haingana kokoa sy tsara kokoa noho ny fomba injenieran'olombelona mampiasa fitaovana mandeha ho azy nentim-paharazana ao amin'ny indostria, hoy ny fanazavan'ireo mpiasan'ny Google ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Google dia nilaza fa ny AI dia haingana kokoa amin'ny famolavolana puce
Linus Torvalds nipoaka indray tao amin'ny lisitra fandefasa-mailaka, tamin'ity indray mitoraka ity dia niaraka tamin'ny anti-vaccine izy io
Nvidia sy Valve dia mitondra DLSS, teknolojia mamela ny gamer hahazo fahombiazana bebe kokoa amin'ny Linux